Kedu otu ndi oru ahia na mmefu ego maka Social | Martech Zone
Etu otu ndi oru ahia na mmefu ego maka Social
Tọzdee, Disemba 19, 2013 Douglas Karr
Wildfire na Ad Age mere n'oge na-adịbeghị anya a nnyocha e mere na-ajụ ihe karịrị 500 ahia ulo oru ndị njikwa na ndị isi gbasara ụzọ ha si azụ ahịa mmadụ. Ha mụtara ihe ụdị akara kacha mma na nke ọma na-eme iji mee ndị na-ege ntị, yana ihe ndị na-agba mgba na mmekọrịta mmadụ na-eme.
Mgbasa mgbasa ozi abụghịzi nhọrọ maka azụmahịa, ọ dị mkpa iji dozie ma chebe iguzosi ike n'ezi ihe nke ika gị n'ịntanetị. Site na ọrụ ndị ahịa na ịre ahịa, ị nwere ike ịchọta ụlọ ọrụ ọ bụla n'ịntanetị - na-enyocha azịza ha na-esote ma gbasaa okwu na ikpeazụ ha. Ọkụ ọgbụgba gosipụtara ihe ndị a:
45% nke ụlọ ọrụ ndị nwere ego karịrị $ 1 ​​ijeri nwere ihe karịrị ndị ọrụ 50 raara nye mgbasa ozi mmekọrịta.
Ahịa, PR, na Ahụmịhe Ndị Ahịa bụ ndị otu kachasị nwere oke na mmekọrịta mmadụ na ibe, mana mmekọrịta mmadụ na ibe ya metụtara ndị otu 10 gafee ọrụ ahụ.
68% nke ụlọ ọrụ na-atụ anya ịba ụba na-elekọta mmadụ na mmefu mmefu ego na-esote, na-egosi na amata ma kwado ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na azụmaahịa.
Tags: 2013ige ntimmefu egoenterprisegoogle +kedu etu esi emefu egoelekọta mmadụ mediamgbasa ozi mgbasa ozionye oruala nke na-elekọta mmadụngwa oku okungwa oku ohia
Slick Kick: Global Global Channel Marketing Platform
Atụmatụ 10 iji kwalite Webinar na-esote